Ndeipi piritsi yevana inonyanya kukurudzirwa? IPAD? | IPhone nhau
Kwatiri isu vakweguru tinazvo zvakajeka, iyo iPad ndiyo piritsi iyo inopa kuita kwakanyanya kuita uye chiitiko mumusika, kutengesa kwayo kunovavimbisa uye isu tinovimbisa humwe hweruzivo rutsigiro urwo makwikwi asinganakirwe. Nekudaro, pamwe izvo zvirimo zvakanangiswa padiki-diki peimba pamwe nehunhu hwayo hwakagadzirirwa nekuda kwekugadzira zvinoita kuti tifunge dzimwe nzira dzakadai se Mahwendefa evana ezvitoro zvakakura seCarrefour, ayo ane akasiyana siyana emagetsi zvigadzirwa anotarisana nediki diki remba uye ayo anonzi ari munzira. Isu tinokubatsira iwe kusarudza Ipiritsi ripi revana kana rinotarisana nevana kuti vatenge, uye pamusoro pezvose isu tichakuudza kana iyo iPad ichisangana kana nevana vadiki.
Sarudza a piritsi yevana Iyo inogona kuve gehena, otomatiki iyo chokwadi kuti iwe haugone kukoshesa izvo zvaunazvo mumawoko ako uye iyo inofungidzirwa kugadzikana, inoita kuti titendeukire kuchikamu chemapiritsi evana anodhura uye takanangisa pane iwo madiki munzvimbo huru seCarrefour. Nekudaro, isu hatifanire kuti titonge kunze kwePadad senzira, rutsigiro rwakakura kubva kune vanogadzira iOS vanogona kuiita piritsi rakachengeteka uye rinonyanya kubatsira kune vadiki mumhuri. Uye zvakare, isu tinowana zvimwe uye zvimwe zvigadzirwa pamusika zvinotariswa navo uye ivo, semuenzaniso iyo Hwendefa Clan 2 yeRTVE iyo yanga iri kubudirira kubvira 2012.
1 Zera rinoperekedza here? Makore matatu haana kufanana nemakore gumi
2 Iyo iPad yakanaka sehwendefa revana here?
3 Ini ndinotenga yakachipa piritsi yevana kana yakanaka piritsi?
4 Iyo App Store ine zvakawanda uye zvirinani zvikumbiro zvevana
5 Mhedziso pamusoro pemapiritsi evana
Zera rinoperekedza here? Makore matatu haana kufanana nemakore gumi
Chinhu chekutanga chatiri kuzotarisa kana tichitenga piritsi yevana Izera remwanakomana wedu. Hwendefa harisi kuzotiperekedza mukukura kwese, zvirokwazvo vashoma vanozove nehunhu hwakanaka kana tikasiya iyo iPad renji. Ndokusaka tichifanira kufunga kana hwendefa revana chiri chigadzirwa chakakodzera mwana wedu. Zviripachena kuti "mwana" ari pakati pemakore matatu negumi nerimwe ekuberekwa haazombodi tablet iyi chero chinhu kunze kwekutamba neAngry Birds shiri kana kutarisa avo avanofarira mavhidhiyo ePocoyo. Iko hakuna kana hurukuro pano, kunze kwekuti kutarisirwa kwevakuru kunogara kuchidikanwa kana uchishandisa matekinoroji, Mahwendefa evana akadai seTablet Clan 2 RTVE anotariswa uye uye kune iwo musika, uye zvaisingakwanise padanho re software zvinokutadzisa nenzira dzese kuti uzvipe kumwe kushandiswa.
Kana tangowana iyo piritsi, kutya kwedu pamusoro pekuti vana vedu vanoshandisa sei internet nyika zvinovharwa. Nekudaro, kana isu takatarisana nejaya rine makore angangoita gumi, tinofanirwa kufunga kuti mumazuva mashoma anozove wechidiki, zera harimuperekedze, mahormoni ari pamusoro uye piritsi revana rinenge riri diki zvakajeka . Isu hatisi kutaura chete padanho rekufamba, chengetedzo kana kuramba, isu tinofanirwa kuyeuka kuti hwendefa rinogona kuve chishandiso chekudzidzisa kana iwe uchiziva kuzvibata.
Apa ndipo patinodzokera kuchikamu chetafura kuCarrefour, asi isu tine dambudziko, huwandu hwemitengo uye mikana yakawandisa uye hatizive kusarudza. Nekudaro, pano mhinduro iri pachena, chikamu chedzidzo chagara chakasarudza iOS uye Apple inoziva kuvachengeta, iyo iPad ndiyo sarudzo yako yakanaka.
Iyo iPad yakanaka sehwendefa revana here?
Zviripachena nekutarisirwa kwakakodzera, hongu. Kwete chete padanho re software, ngatitange nekurwisa. Kutya kwedu kukuru patinosiya piritsi "repamusoro-soro" senge iyo iPad kune vadiki ndiko kufarira kwavo kushora kwezvinhu zvese zvavanazvo pamunwe wavo. Iko hakuna bvunzo iri nani yekusimba pane kusiira mudziyo kumwana diki kwemazuva akati wandei, chete Nokia ndiyo inoziva kupasa bvunzo idzodzo. Nekudaro, Apple inovanza runako rwakasiyana rwezvishongedzo kuseri kweiyi symmetrical dhizaini uye kutarisirwa kwemidziyo yayo. Kuve chiratidzo chinozivikanwa isu tichawana akawanda makavha uye vadziviriri vevana veiyo iPad, izvo zvinoita kuti ive imwe inonakidza kwazvo 10-inch mapiritsi.
Kungopinda iwo mavara «iPad kesi yemwana» muAmazon ichatiratidza zvisingagumi Ultra-inomiririra zvishongedzo zvepiritsi redu, mahwendefa emakesi evana anoita kuti iyo iPad ive yakanaka yekufambisa shamwari kune wako mudiki uye ichave nechokwadi chekuti iyo iPad inonyatsomira mese matambudziko avo. Nekudzivirira kukuru, huwandu hwegirazi rakadzikiswa rePadad zvakare rakafararira, rinogara riri pasi pegumi nemashanu euros, pamusoro pezvo, zvitoro zvakakura sePrimark zvinotipawo izvi zvishongedzo zveiyo iPad.
Kugadzikana hakufanirwe kuve kutya kana zvasvika pakutenga iyo iPad yevana. Iye zvino tinoenderera kune iyo software. In-app kutenga uye bhurawuza kushandiswa kunogona kukonzera kutya. Zvisinei iyo Kudzora kwevabereki paIOS zvinoita kuti usatye kuona vana vane mapiritsi. Iwe unogona kusarudza nyore nyore kuti ndeapi mashandisirwo anozokwanisa kushandisa uye api maapplication ausingazokwanise kushandisa, iwe uchawana hutano uye rugare rwepfungwa. Uye zvakare, iwe unogona kuvharira zvakabatanidzwa kutenga mune ese maficha, nekuti iwo mutemo weApp Store.
Ini ndinotenga yakachipa piritsi yevana kana yakanaka piritsi?
Pano mhinduro iri pachena, hatisi kuzoongorora bhajeti remumwe muverengi, kure nazvo, zvisinei, kana tiri kudzidza chimwe chinhu nekufamba kwenguva, ndizvozvo muhunyanzvi, zvakachipa zvinowanzo dhura. Isu tinodzokera kuchikamu chetekinoroji yenzvimbo hombe uye tinoona kuti mune vamwe vane chikamu chisingaperi chemapiritsi akadhura muCarrefour kana nzvimbo dzakadai. Zvisinei, chimwe chinhu chaunofanira kuchengeta mupfungwa, aya "mahwendefa evana" haasi evana. Padanho rekuumba, izvo zvishandiso zvinowanzo kuve zvine hukama nekuparadzwa zviri nyore, pamusoro pezvo, hazvigone kuti iwe uwane zvigadzirwa zvakapihwa kuvana nekuti ndezvipfupi zvigadzirwa, zvevasingazivikanwe mavambo (kazhinji maChinese) uye kuti havana chero mhando yehurefu hwevakuru kana husina kufanira accessories.
Tinoramba tichitarisa, tinowana mahwendefa maviri gumi-masendimita, imwe inodhura mazana maviri emamiriyoni euros uye imwe chete euros 10 Tinozviona zvakaoma kuona mutsauko, pakati penhamba dzakawanda nevimbiso, zvinoita kunge zvakangofanana. Zvisinei, hapana chingave chiri kure kubva pachokwadi. Aya mahwendefa akadhura anowanzove nehurdware yaive yatove yechinyakare makore apfuura, ine zvidiki zveRAM izvo zvinoita kuti zvive zvisingatsungirike muhurongwa hwekushandisa senge Android. Nekudaro, ichokwadi kuti mapiritsi akaita seXperia, Samsung kana Huawei zvakatodhura, asi ipa zvese zviri zviviri sarudzo yezvinhu uye software-chikamu rutsigiro iyo yausingawane mune iwo mabhenji ematafura akachipa kubva kuCarrefour.
Iyo App Store ine zvakawanda uye zvirinani zvikumbiro zvevana
Imwe nzvimbo yekusiyanisa chitoro chekushandisa. Tichiri pa Android isu ticha tsvaga zviuru nezviuru zvezvishandiso zvakagadzirwa uye kutinyengedza, muApp Store isu tine kutonga kwemhando yepamusoro izvo zvimwe zvikumbiro zvisingatombo pfuure. Chii chimwe, kushambadza pa Android kunonyanya kuvhiringidza mune emahara kunyorera, saka vana vedu vanogona zvakare nyore kuwana kushambadzira isina kukodzera zera ravo renji.
Zvichakadaro, iyo App Store haina chete ine yakasarudzika sarudzo yekushandisa, asi zvakare ine rutsigiro rwevanogadzira uye ine chikamu chakagadzirwa nevevadiki, iko kuunganidzwa kwevana kunyorera kwePadad hakugone uye kuri kwakanyanya mukufarira. .
Mhedziso pamusoro pemapiritsi evana
Mhinduro apa iri nyore, vashandisi vazhinji vanotenga mapiritsi evana vanoita mhosho yekungotenga mapiritsi akadhura ane masystem anoshanda eApple, zviri pachena kuti chikanganiso. Zvirokwazvo iyo yakanakisa sarudzo yevana ipiritsi rakazvipira rakadai seTafura Clan 2 RTVE nemutengo we130 euros chete uye zvese zvaunogona kuenda. Kana kuenderera kune dzimwe nzira neIOS senge iyo iPad Air 2 iyo parizvino iri ye429 euros muchitoro chepamutemo cheApple, ichiperekedzwa nechishongedzo chevana kana Smart Case kana iri yevateereri kubva pamakore gumi ekuberekwa, iine vimbiso yekuti ichashanda sechishandiso chekudzidzisa mune ramangwana.
Kana bhajeti yedu yakadzikiswa, Mahwendefa akagadzirwa uye uye evana ndiyo chete sarudzoSezvo mapiritsi akadhura-masendimita gumi achiwanzopa kwete chete kuita kwakaipisisa, asi mhando yezvinhu zvinotimanikidza kuiisa panzvimbo iri pedyo yakachena mumwedzi mishoma, zvinowanzodiwa kutenga chimwe chinhu chehunhu, Kunyanya kana isu tiri maererano nediki diki reimba, kuisa mari muvana haisi sarudzo, asi chinofanira kunge chiri basa, saka ndiyo chete imwe nzira yatinoona inoshanda. Kunze kweizvi zvese, dzidzo yemwana inokanganisa mashandisiro aanoita uye mabatiro aanobata mudziyo, kurebesa kana kudzikisira kureba kwayo nekufamba kwenguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Ndeipi piritsi yevana inonyanya kukurudzirwa? IPAD?
Piritsi rakanakisa remwana… HAPANA !! Zvakareruka sekudaro. Uye kubvisa ipad yemazana mazana mana emadhora.
Chizvarwa chei chema morons zuva rese chakasungirirwa pahwendefa, rudzii rwemangwana rakatimirira? Kutenda zvese zvisina maturo zvavakaverenga padandemutande vasina kufunga kana kufunga uye pamusoro vakanamatira pamitambo yemavhidhiyo vasina kudzidza kana kuita homuweki. Zvakanaka izvo, iro ramangwana rakatimirira ...
Connio IOS 5 Nokusingaperi nei usiri munhu mukuru, uchazonzwisisa rini kuti chizvarwa chemireniyumu chimwe chinyorwa, iwe unofunga kuti une makore makumi mashanu?
Pindura kuna Mordiano
Apple inogadziridza Mapeji, Numeri uye Mapeji zvinoenderana neIOS 11